Uyenza njani inombolo yefowuni ebonakalayo yokufumana iSMS? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Uyenza njani inombolo yefowuni ebonakalayo yokufumana iSMS?
Kule mihla, akukhuselekanga ukupapasha inombolo yakho yefowuni yokwenyani. Kodwa unokwenza inombolo ebonakalayo yokufumana iSMS, isimahla. Sebenzisa iseva yePingi yasimahla.
Thatha ithuba kwaye kufuneka uphumelele. Ngethamsanqa.
Apha unokwenza ifowuni apho usenokwenza khona kwaye ufumane iifowuni
inombolo yeselula ebonakalayo
Unokwenza inombolo yefowuni ebonakalayo yokufumana imiyalezo yeSMS. Kukho iinkonzo ezininzi kwi-Intanethi apho unokwenza inani leselula, nantsi ezinye zazo
Inkonzo entsha ye-SMS yokuvula-amaxabiso asezantsi okuvula kunye nokuqeshisa kwigumbi, isantya esiphezulu sokufika kweSMS.
Kwizitokhwe zaseRussia, amanani aseJamani naseBritane amanani aqeshiweyo okufumana iSMS.
Unokwenza inamba yefowuni ebonakalayo kulo naliphi na ilizwe ngokubhatala imali kule indawo. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ixesha elinye ukuba ungumntu wokwenyani, ke ndikucebisa ukuba usebenzise le inkonzo. Yonke into ilula apho, khetha inombolo oyifunayo, uyfake kwaye uyithumele kwifestile yokuqinisekisa, kwaye ulinde impendulo ye-SMS.
Umzekelo, apha https://zadarma.com/en/tariffs/numbers/
Ndifuna ukucebisa ngakumbi le nkonzo, ihlawulwa, kodwa ayibizi, isebenza kakuhle kwaye ihlala indinceda xa ndingafuni kukhanyisa inombolo yam yefowuni. Inkonzo yeyaseRussia, yonke into inomdla, kulungele ukubuyisa i-Yandex okanye iWebmoney.
Kwi-Intanethi, ndafumana indawo malunga nelizwi likaGoogle Google (Voice Google) inombolo yaseMelika ebonakalayo: http://www.googlevoice.tk
Nazi iinombolo zeSMS zokufumana imiyalezo
Unokuziqhagamshela nenombolo ebonakalayo, emva koko uya kuba neakhawunti yobuqu apho unokufumana khona kwaye uthumele imiyalezo ye-sms kwaye ungakhanyisi inombolo yakho. Yena ngokwakhe unenombolo enjalo: http://freezvon.ru/sms-numbers.html kwaye uyonwabile kakhulu ngayo. Ndihlala ndiyisebenzisa ukuthumela imiyalezo nge-sms okanye isiqinisekiso sobhaliso kwiinkonzo ezahlukeneyo zangaphandle.
Uya kudinga inombolo yefowuni eyiyo ukuba
Kuya kufuneka wenze iposi enkulu yemiyalezo yeSMS,
Kuya kufuneka ukuba ufumane uninzi lwemiyalezo yeSMS.
Zininzi izibuko ezisebenza ngamanani akwi-intanethi. Nantsi enye yazo:
Ndikhe ndabuza umbuzo ofanayo malunga nendlela yokubhalisa kwiVKontakte ngaphandle kokubonisa inombolo yam yomnxeba. Ukwenza oku, kufuneka usebenzise uhlobo lwenkonzo yasimahla yokufumana i-sms online kwi-Intanethi. Ndibhale apho mpendulo, apho adwelise inani leenkonzo ezifanayo. Andizukuphinda apha.
Inkonzo endiyisebenzisileyo isisiseko kakhulu - ukhetha inombolo, uyayibonisa kwaye ulinde iSMS ukuba ize kuyo.
Impendulo yam yokuqala yayicinyiwe, ndakhomba ngengozi ikhonkco kwindawo engalunganga.
Apha apha (ikhonkco eliqingqiweyo) unokwenza inombolo yasimahla yokufumana iSMS.
Oku kubaluleke kakhulu, kuba kule mihla, ukupapasha inombolo yakho yokwenyani kuyingozi kakhulu.
Ndandinjalo. Ndinike inombolo, ke emva koko baqhagamshela inkonzo ye-body-2 ehlawulelweyo kuyo kwaye bathabatha i-ruble ezingama-20 ukuya kwezi-30 ngosuku ngaphandle kolwazi lwam. Yothuke! Ngoku naphi na apho ndifumana khona inombolo yefowuni yokwenyani andiyi.
Ngendlela, ukuba sithetha ngeVkontakte, ke ngesizathu esithile ndibathemba. Akukho sizathu sokusebenzisa iinombolo zomsebenzisi kuba kungenjalo baya kuphulukana neendwendwe kunye nabasebenzisi.
Nje ukuba ndifumene kulwazi lwe-intanethi ukuba kukho iqela leVKontakte vk.com/club79895742, eliqela libizwa ngokuba: Google Voice + nenombolo yaseMelika ebonakalayo.
Ngoku ndinenombolo yefowuni yaseMelika yeminxeba kunye neSMS. Kulungile ukuba kukho abantu abanobubele. Mhlawumbi olu lwazi luluncedo kuwe.
Ukwenza inani elibonakalayo leSMS, kufuneka ubhalise kwindawo enikezela inkonzo efanayo. Umzekelo, kwiziko leSMS sms.ru. Oku inkonzo ihlawulwe, kodwa inokuthenjwa. Itshekisiwe, iLanga iyasebenza. Ngoncedo lwale ndawo ungalungiselela ukuthunyelwa kwee-imeyile ezininzi ngeSMS.
Unokusebenzisa inkonzo yasimahla Pinger. Kwangelo xesha, unokufumana inombolo yasimahla yesoftware eMelika (ukuba ukhetha, ungachaza imeko yomdla). Ukwamkela nokuthumela imiyalezo ye-sms kwenziwa ngendlela yewebhu efanelekileyo. Ukuba inani alisebenzi ngaphezulu kweentsuku ezingama-30, kuyakhululwa inombolo yenombolo.
Unokwenza inani elibonakalayo ngokwakho. Kodwa oku, usadinga ikhadi le-SIM lokwenyani kunye nezakhono zenkqubo ethile.
Umzekelo, kwi apha Baxela ngokweenkcukacha indlela yokwenza isango le-VoIP-GSM usebenzisa imodem eqhelekileyo ye-3G. Kodwa oku, njengoko benditshilo, izakhono ezithile ziyafuneka.
Kukho ukhetho olulula, umzekelo, i-GoIP efanayo. Apha ku-habr uxelelweyintoni kwaye njani Oku kuyinyani xa iindleko zinobulungisa, kuba amasango ayisiyondlwan 'iyanetha.
Kananjalo, kwiinkonzo ezahlukeneyo, amanani okufumana ii-SMS ahlulahlulwe zaba zibini: inani eliqinisekileyo kunye nenani lokwenyani. Amanani Virtual manani angenawo amakhadi e-SIM okwenyani. E-Russia akukho manani anje, ahlala afumaneka kumazwe ahambele phambili kwezobuchwephesha (i-USA, i-EU). Kunzima ukufumana iSMS evela kwiinkonzo ukuya kula manani, kuba amacebo anokuma zombini kwicala lomsebenzisi neli icala lomthumeli (kukho izinto ezixinzisayo apho umthumeli wenkonzo anokuthi aqonde ukuba ngaba le iyona-SIM khadi okanye yeyokwenyani). Inani lokwenyani liyi-SIM khadi yeklasi efakwe esangweni (umzekelo, kwenye yezi zichazwe apha ngasentla). Apha, umthumeli wenkonzo akaboni ukuba ingaba iyindawo yeSIM khadi yakho okanye yenye yamakhulu afakwe kwisango leSMS.
Iinkonzo ezinje-sms-online.com okanye onlinesim.ru zinika uninzi loluntu. Apho i-sms engenayo ingabonwa ngabo bonke abatyeleli kwindawo. Kodwa ngenxa yoko kusimahla.
Kukho iinkonzo ezihlawulelwayo apho unokufumana khona igumbi lokusetyenziswa komntu ngamnye kunye nexesha elide. Kuya kukhuseleka ukuba uyisebenzisa ukubhalisa kwiinkonzo zentlawulo okanye kwiinethiwekhi zentlalo (ukuba ufuna i-akhawunti ixesha elide). Umzekelo kule inkonzo amazwe angaphezu kwama-30 anokukhetha kuwo (nangona kukho amanani abonakalayo nawokwenyani). Ngamanye amaxesha ukukhushulwa kwenzeka, kwaye ukuba ufuna ukufumana i-SMS kube kanye, banokunika mahala.
Ke konke kuxhomekeke kwiimfuno kunye nobuchule bakho.
Imibuzo ye-29 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,433.